बालबालिकालाई धुमपान-मद्यपानबाट कसरी टाढा राख्ने : फेसबुक बहस - विवेचना
बालबालिकालाई धुमपान-मद्यपानबाट कसरी टाढा राख्ने : फेसबुक बहस
January 10, 2018 432 Views
धुमपान, मद्यपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, आजभोलि विद्यार्थीले स्कुल ड्रेसमै धुमपान गरिरहेको देखिन थालेको छ । चुरोट तान्ने, मधु गुट्खा खानुलाई सामान्य रुपमा हेर्न थालिएको छ । विद्यालय वरपर खुलेआम चुरोट-गुट्खा बेचिन्छ । ससाना नानीहरु यस्तो लतमा फस्दै जानुमा को दोषी ? यसलाई रोक्न सरकारी निकाय, अभिभावक, शिक्षक, व्यवसायी कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? बालबालिकालाई धुमपान-मद्यपानबाट टाढा राख्नका लागि कस्ता प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ ?
केही वर्षअघि सरकारले सार्वजनिक स्थान जस्तै अस्पताल, मठमन्दिर, विद्यालय, विभिन्न संघसंस्था आदिका वरिपरि धुमपान तथा मद्यपान बेचबिखनमा बन्देज लगाएको थियो । केही स्थानमा केही समय त बन्द पनि गरियो । तर, त्यसपछि फेरि जस्ताको तस्तै छ । त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ? त्यसको विरुद्द आवाज उठाउने कसले ?
कुनै पनि समस्याको जरैबाट समाधान गर्नु छ भने त्यस समस्याको स्रोत पहिचान गर्नु जरुरी छ । तपाईं हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि धुमपान मद्यपान आफै“मा स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन । आजभोलि धेरै जसो बालबालिका कुलतमा फसेको अवस्था छ । सानै उमेरदेखि चुरोट तान्ने, मधु गुट्का खाने जस्ता लतमा फसेको पाइन्छ । आजका बालबालिका भोलिका कणधार हुन् । तसर्थ बालबालिकालाई यस्ता कुलतबाट टाढै राख्नु पर्दछ ।
सर्वप्रथम त सबै अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीलाई उचित निगरानीमा राख्नु पर्दछ । तसर्थ, आफ्ना नानीले कस्ता साथीका सङ्गत गर्दैछन्, कुनै नराम्रो कुरा पो खाँदैछन् कि त्यो विषयमा समेत आफू जानकार रहनु पर्दछ ।
यस्तै विद्यालयले पनि विद्यालय वरिपरि पसल सञ्चालन गरेर बस्ने व्यक्तिलाई सकेसम्म धुमपान-मद्यपान बिक्रीमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ । यदि बिक्री गरे पनि विद्यार्थीलाई धुमपान मद्यपान बिक्री वितरण नगर्न अनुरोध गर्ने । यसरी सकेसम्म सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्ति, सम्बन्धित निकायले आफै पनि बालबलिकालाई कुलतमा फस्न नदिन जनचेतनादेखि आवश्यक भूमिका खेल्न सके कुलतमा फस्नबाट बचाउन ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
धुमपान मद्यपान के बालबालिकाको लागि मात्र निषेधित हो ? कि अभिभावक वर्गलाई पनि ? अभिभावक आफू चाहिँ धुमपान मद्यपान गरेर बस्नुभएको छ भने यहाँ बालबालिकालाई मात्र किन तानिराख्नुभएको छ ? प्रश्न गहिरो छ ।
पहिले त अभिभावकको जिम्मा रहन्छ । तपाईं आफू यस्ता कुराबाट पर रहनुहुन्न भने तपाईंको उपदेश अर्तिको कुनै महत्व हुँदैन । त्यसो नगर भन्न त सक्नुहुन्छ तर प्रभाव पर्दैन । धुमपान र मद्यपान नेपालको वातावरणसँग मिल्दो नै छैन जस्तो लाग्छ । मद्यपान जाडो ठाउँ वा देशबाट प्रचलित हुँदै यहाँसम्म सिकोको रुपमा आएको हो । जबसम्म सम्पूर्ण अभिभावक वर्ग या माथिल्लो वर्गले आफ्नो गल्ती सुधार्दैनन् तबसम्म यसको सेवन बढिरहनेछ । यहाँ सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुरा छिटो फैलिन्छ । धुमपान-मद्यपानको सिकोलाई मानिस लत भनिरहेका छन्, वास्तवमा मानिस देखाउनलाई यसलाई लत बनाइरहेका छन् । पछि यही कुरा लत बन्दछ ।
धुमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ, यो विद्यालयमा बालबालिकाले पढेका हुन्छन् । धुमपानजन्य वस्तुको आवरणमा पनि ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ लेखिएको हुन्छ । तै पनि धुमपान मद्यपान गर्नेको संख्या बढेको पाइन्छ । बालबालिकाकै अगाडि ठूला मान्छेले धुमपान गर्ने भएकाले गर्दा पनि बढेको हुनुपर्छ । घरमा विभिन्न तनावले गर्दा पनि बालबालिका धुमपान मद्यपानको कुलतमा फस्छन् । विद्यालयमा वरपरका पसलमा समेत धुमपान बेच्नेको संख्या अधिक छ । यो बन्द गर्नुपर्छ । शिक्षकले नै कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीको अगाडि धुमपान-मद्यपान गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा पनि विद्यार्थीले सिक्छन् । विद्यार्थीलाई बिक्री गर्न समेत रोक लगाउनु पर्दछ । सरकारले बालबालिकालाई धुमपान मद्यपान नियन्त्रण गर्न विभिन्न नियम ल्याए पनि कार्यान्वयन नभएको पाइन्छ । कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । आफूले प्रयोग गरे पछि चुरोट बिँडी, मधुका खोल टुक्रा जहाँत्यहीँ फाल्नाले पनि बालबालिका त्यसप्रति बढी चासो राख्ने हुन्छन् । नेपालमा धुमपानले गर्दा आर्थिक स्रोत बढाएको छ, यसको कारखाना बन्द गर्नुभन्दा पनि यो कसरी प्रयोग गर्ने, साना बालबालिकालाई यो सेवन गर्न नदिन के गर्ने, त्यो बुझ्न जरुरी छ ।
मद्यपान तथा धुमपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो भन्ने थाहा छ । यहाँ कुरा के छ भने जो व्यक्ति यस विषयमा ज्ञान दिने कुरा गर्छ, उही नै यस लतको सिकार भएको देखिन्छ । विद्यार्थीलाई सिकाउने शिक्षक नै आफैँ सेवन गर्नु प्रमुख एक कारण हो । खुल्लारुपमा बिक्री हुनु यसको मुल कारण होइन । विद्यार्थीले आफू खाँदिन भन्ने दृढता प्रकट गरेमा पनि यसको सेवन गर्ने संख्यामा कमी आउँछ । दोष लगाउने मात्रै होइन, वातावरण र अभिभावकले छोराछोरीको क्रियाकलापमा ध्यान नदिनु प्रमुख कुरा हो ।
सर्वप्रथम बालबालिकालाई अभिभावकले नै सानो उमेरबाटै शिक्षा दिँदै आउनुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक स्थानमा सेवन गर्नेलाई कारवाही गर्ने र जरिवाना तिर्नु पर्ने नियम बनाए पनि अझै कार्यन्यन हुन सकेको छैन । केही वर्षयता धुमपान र मद्यपानको खोलहरुमा सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भनेर ठूल्ठूला क्यान्सरका तस्वीर राखिए पनि आम युवा र बालबालिकाले झन् बढी प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । यस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ बनाउने कम्पनीलाई न्यूनीकरण र खाने व्यक्तिलाई सचेत गराउनु पर्छ । धुमपान र मद्यपानले शारीरिक रुपमा मात्र होइन, मानसिक रुपमा पनि क्षति गर्ने भएको हुँदा यसप्रति सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । केन्द्रीय सरकार र प्रदेशको तर्फबाट नेपालभरि नै नागरिक सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु पर्दछ । अभिभावकले बालबच्चालाई सूर्तीजन्यपदार्थ धुमपान र मद्यपान किन्न नपठाउने जस्ता कार्य गरेमा यस्ता समस्या केही हदसम्म कम हुने थियो कि !
हाम्रो समाज अहिले धुमपान र लागुपदार्थमा मस्त छ । यो अवस्थामा यो समस्या सम्बन्धी कुरा राखेकोमा एकदम खुशी लागेको छ । वास्तवमा हाम्रो समाजका अधिकांशले अहिले धुमपान र मद्यपान गरेको पाइन्छ । जब ठुलो र आशलाग्दो व्यक्ति आफैँ यसको प्रयोग गर्छ भने बालबालिकाले पनि यसको सिको गर्नु स्वभाविकै हो । अबको समाज हामी आफैंले धुम्रपान र लागुपदार्थरहित समाज बनाउन आवश्यक छ । बालबालिकालाई यसबाट टाढा राख्न जरुरी छ ।
सर्वप्रथम बालबालिकालाई धुमपान र मद्यपानबाट टाढा राख्नको लागि आफूले त्यस्तो पदार्थको सेवन गर्नुभएन । अहिले जताततै विकृति फैलिएको छ । बालबालिकामा नकारात्मक असर परिरहेको छ । अहिलेका ठूलाबडा भन्नेहरु नै बालबालिका को छेउमा धुमपान गरिरहेका हुन्छन्, अब ती नानीहरुले के सिक्लान् ? यो कुरा सोच्न जरुरी छ । स्कुल कलेजको छेउछाउमा त्यस्तो वस्तुहरु नबेचौँ । सार्वजनिक ठाउँमा धुमपान र मद्यपान गर्नेलाई कानुन कारबाही हुन आवश्यक छ । हानिकारक वस्तुको बिक्री वितरणलाई प्रोत्साहन नदिऔँ । सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट शिक्षक, अभिभावक, व्यापारीहरुले जिम्मेवारी लिन जरुरी छ ।
एचयदझि ष्क तजभ बदकभलअभ या ष्मभब लयत तजभ बदकभलअभ या कयगितष्यल। १८ वर्षभन्दा मुनिका जोकोहीले खरीद गर्नु नहुने कानुन बनाइदिनुहोस् । जसले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई धुमपान र मद्यपान बिक्री वितरण गर्छ उसको बिजनेस लाइसेन्स खारेज गर्नुका साथै दुई वर्षको जेल सजाय हुने कानुन बनाउनुहोस् । १८ वर्षभन्दा मुनिका जो कोहीले खरीद गर्नु नहुने कानुन बनाइदिनुहोस् । जसले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई धुमपान र मद्यपान बिक्री वितरण गर्छ, उसलाई कानुनी सजाय दिए यो समस्या आफैँ समाधान भएर जान्छ ।
बालबालिका कलिलो उमेर भएकाले उनीहरु छिट्टै यस्ता कुरा सिक्छन् । यसले गर्दा आज हाम्रा ससाना नानीले पनि धुमपान, मद्यपान गर्दैछन् । स्कुल व्यवस्थापनले पनि सरकारी निकायको मद्दत लिएर त्यस्ता दोकान बन्द गर्न लाउनुपर्छ । सरकारले पनि यस कुरालाई गम्भीरले लिई उपयुक्त कदम अपनाउनु पर्छ ।
हाम्रा बालबालिकालाई यस्ता कुलतबाट बचाउन स्कुल वरिपरि धुमपान-मद्यपान जस्ता स्वास्थ्यका लागि घातक पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउनु पर्छ । कानुनको सहायता लिनुपर्छ । बालबालिका कुलतमा नलागून् भनेर गाउँ गाएँमा धुमपान र मद्यपानका असर, यसले लाग्ने घातक रोग र अन्य कुराको जनचेतना दिनुपर्छ । जसले गर्दा यी सबै कुराबाट बालबालिका टाढा रहन्छन् ।
कुनै बालबालिकाले सेवन गरिरहेको पाएमा उसलाई सम्झाउनु पर्छ । उसको घर-परिवारमा जानकारी गराएर बेलैमा सचेत गराउनु पर्छ । सबैभन्दा पहिला आफू राम्रो हुनुपर्छ, अनि अरुलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ । साथी, शिक्षक कस्ता छन् ख्याल गर्नुपर्छ ।
यसको जिम्मेवार हामी नै हौँ । सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई वास्ता नगरी बुझ पचाउनु हाम्रै मूर्खता हो । अब यसबाट टाढा राख्नको लागि सबैभन्दा अगाडि जागरुक हुन जरुरी छ । आफ्नो व्यवहारमा उतार्न नि जरुरी छ । केही समय अघि बन्देज गरियो, मात्रै देखावटी रुमा । हामीले त्यसलाई लागु गर्न सक्नुपर्छ । र, आफू अनि आफ्नो परिवारबाटै धुमपान-मद्यपानको सेवन त्याग गर्न थालनी गर्नुपर्छ । फेसन र रवाफमा यो सब गर्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट आफूलाई नै हानी नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन सक्नुपर्छ ।
पसलमा प्याकेट मात्रै बिक्री गर्ने । खिली-खिली बेच्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै नसाका चिजको मूल्य अत्यधिक बढाइनु पर्छ ।
धूम्रपान र मद्यपानजन्य वस्तुहरु किनबेच गर्न जो कोहीलाई दिने व्यवस्था बन्द गरी निश्चित ठाउँमा निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिहरुले मात्र किनबेच गर्ने व्यवस्था लागू भयो भने यस्तो विकृति सदाको लागि अन्त्य हुने थियो ।
सवी तुम्रोक प्रधान
बालबालिकालाई धुमपान-मद्यपान बेच्ने पसलेलाई आफ्नो छोराछोरीले त्यो सेवन गर्दा कस्तो लाग्छ ? यस्ता पदार्थ बिक्री गर्दा अरुको छोराछोरीको भविष्यको ख्याल गर्न जरुरी छ । अभिभावक र शिक्षक आफैँ यस्तो कुलतमा फसेका छन् भने झन् ठूलो समस्या हो । नखाओ भनेर सिकाउने नै कुलतमा भएपछि कसरी टेर्छन् उनीहरुले ? अझ टेलिभिजन, सिनेमामा यस्ता कुरा देखाउन दिनुहुँदैन । सानो अक्षरमा धुमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ लेख्ने अनि धुँवा उडाउने र मुख बिगार्दै चुस्की लगाएको देखाउँदा त्यसको नकारात्मक असर कति पर्ला ? बालबालिका भोलिका भविष्य हुन्, त्यसैले उनीहरु बिग्रनुमा आफ्नो भूमिका कति हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।
बालबालिकाको प्रथम शिक्षक नै घरका अभिभावक हुन् । आफ्ना अभिभावकले गर्ने बोली, व्यवहार, चालचलन तथा रहनसहन बच्चाहरुले चाँडै सिक्दछन् । तसर्थ बालबालिकालाई मद्यपान तथा धुमपानबाट टाढा राख्न अभिभावकको नै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अभिभावकले यसको प्रयोग नगर्ने अथवा गरिहाले नि बच्चाहरुबाट टाढा रही वा नदेख्ने गरी प्रयोग गर्ने गर्नु पर्दछ । धुमपान तथा मद्यपानको किनबेच तथा ओसारपसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु हुँदैन । आजभोलि विद्यालय तथा कलेज पढ्ने विद्यार्थीमा यसको प्रयोग बढेको देखिन्छ ।
आफूभन्दा ठूलाको सिको गर्ने र यसको प्रयोग गरे आफू नि ठुलै मान्छे भएको भन्ने गलत मनोभावना बृद्धि भएकाले नि यस्तो समस्या देखापरेको हो । बालबालिकालाई यस्ता किसिमका दुर्व्यसनबाट टाढा राख्न राज्यपक्ष तथा गैरराज्यपक्ष दुवैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नागरिक सचेतना कार्यक्रम राख्ने, धुमपान तथा मद्यपान खुलेआम बिक्री वितरणमा रोक लगाउने, बालबालिकालाई यस्ता पदार्थ लिन पसल नपठाउने आदि जस्ता कार्य गरे मात्र पनि यस्ता समस्या केही हदसम्म कम हुने थियो कि !
धूम्रपान गर्नु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्दै खोल अगाडि ठूलो चित्र बनाएर बेचिरहेको छ । अचेलका युवा बालबालिका यसको सिकार बन्न पुगेका छन, यो लतबाट छुटाउन हम्मे हम्मे हुन्छ । स्कुल कलेजहरुका छेउछाउमा खुलेआम रुपमा मद्यपान, धुमपान बेच्न दिनु हुँदैन । त्यस्तो गरेको अवस्थामा कारबाही गर्नु पर्छ । त्यसो गर्नुको सट्टा आफैँ उल्टै बसी बसी खाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । त्यसैले यसको जिम्मेवार भनेको अभिभावक, शिक्षक र आफू स्वयम् हो ।
Previous क्यालिफोर्नियामा भूस्खलन, १३ को मृत्यु
Next महापुराणमा ३० लाखभन्दा बढी संकलन